jeudi, 09 mai 2019 22:01
Kitra - CAN 2019: Hanolo-tanana ny Barea ny Zanakala FC
Harotsaky ny Zanakala FC manontolo ho fandraisany anjara amin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na Barea, hiatrehany ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika hatao any Egypta, ny vola miditra mandritra ny fihaonan’ny Zanakala FC amin’ny AS Adema, lalao hatao ny alahady 12 mey 2019.
jeudi, 09 mai 2019 16:57
BNGRC: Nomen’i Thaïlande vary 7 200 Kg
Ho fanohanana ny Malagasy tra-pahasahiranana monina any Atsimon’ny Nosy, taorian’ny antso tolotanana nataon’ny governemanta malagasy, ity fanomezana vary milanja 7 200 Kg avy amin’ny fanjakana thaïlandey ity ny fiandohan'ny herinandro teo.
Mifanandrify indrindra tamin’ny fametrahana amin’ny fiandrianany ny Mpanjaka Rama X any Thaïlande izao tolotanana mariky ny fanehoana firaisankina amin’ny Malagasy izao, araka ny nambaran’ny mpitantana vonjimaika ny Consulat de Thaïlande eto Madagasikara, Kriwat Phamorabutra.
Nandray ny fanomezana ny minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Razafimahefa Tianarivelo sy ny Sekretera mpanatanteraky ny BNGRC, kolonely Andriakaja Olivier Elack.
jeudi, 09 mai 2019 16:48
Haintrano teo Ambodivona: 2 miliara Ariary eo ny teti-bidin’ny entana simba sy may
Trano hazo mivarotra « brocanteur », fivarotana hani-masaka, entana madinika ary kojakoja momba ny lamba sy zaitra miisa 80 no levon’ny afo tanteraka tetsy Ambodivona Boriborintany fahatelo Antananarivo Renivohitra ny alin’ny 08 mey 2019.
Fifampikasohana tariby mitondra herinaratra avy amin’ny mpivarotra enta-madinika iray no niandohan’ny afo tokony ho tamin’ny 8 ora sasany alina ka nahatonga ny loza.
Tsy nisy ny aina nafoy fa tombanana teo 2 miliara Ariary eo ny teti-bidin’ny entana simba sy may tamin’izany araka ny nambaran’ny tompon'andraikitry ny tsenan’Andravohangy.
jeudi, 09 mai 2019 16:39
Lisi-pifidianana hosoka: Nidoboka am-ponja vonjimaika ny filohan’ny CED Ihosy
Nanabotsina lisi-pifidianana ary mbola nanomana mialoha fomba hangalaram-bato ho an’ny kandida iray amin’ny fifididianana solombavambahoaka hatao amin’ny 27 mey 2019 no isany niampangana an’i Rakotozandriny Louis Valdor, filohan’ny rantsamangaikan’ny CENI ato amin’ny Distrikan’i Ihosy.
Ny talata 7 mey 2019 izy no notanana am-ponja vonjimaika eto amin’ny fonjaben’i Ihosy.
jeudi, 09 mai 2019 16:28
KMF/CNOE: Miantso ny rehetra hanaja lalàna
Manentana ireo tompon’andraikitra tsy hisalasala handray ny andraikitra tandrify azy ny KMF/CNOE -Fanabeazana Olompirenena manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy fihoaram-pefy amin'izao fotoanan'ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahaoka izao, indrindra mikasika ny fametahana ireo peta-drindrina eny rehetra eny.
Manainga ireo kandidà sy ireo mpiara-dia aminy ny KMF/CNOE mba hanàja ny lalàna mikasika ny fametahana ireo peta-drindrina. Eo koa ny fanajàna ny lalàna mikasika ireo hevitra voizina manditra ny fampielezan-kevitra, mba tsy hivoy fifampihantsiana na fifanaratsiana amin’ireo kandidà mpifaninana hafa. Izany, hoy ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena, dia ho fitsinjovana ny filaminana sy ny fitoniana mandritra ny fampielezan-kevitra.
jeudi, 09 mai 2019 16:20
Ambohipo - Mahazoarivo: Mitondra fanampiana ho an'ireo sahirana i Lanto Rakotomanga
Nitohy teny Ambohipo sy Mahazoarivo ny fampielezan-kevitra nataon'ny kandida laharana 01, Lanto Rakotomanga sy Jaojoby Eusèbe, izay lisitra natolotry ny antoko politika, Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, ato amin'ny Boriborintany faha II.
Ny fampandrosoana tsy vita irery, manomboka any amin'ny madinika izany, koa mila jerena manokana izy ireo hoy i Lanto Rakotomanga rehefa nitondra ireo fanampiana ho an'ireo sahirana. Miara-mientana isika hisian'ny fampandrosoana hoy hatrany izy.
jeudi, 09 mai 2019 15:07
Ifanadiana: Fampielezan-kevitra hafa kely
Feno ny afisin'i kandida MANANTENA Hajanirina Dinah, na fantatra amin'ny hoe Haja, izay voaroiroy tamin'ny resaka kidnapping tany Antsirabe sy Toamasina, fa nahazo fahafahana vonjy maika, ny eto Ifanadiana.
Ireo mpitsara dimy tany Toamasina nanome izany fahazoana mivoaka ny fonja izany aza moa dia nahantona tamin'ny asany.
Araka ny fanambaran'ny CENI anefa dia tsy mampiova ny lisitr'ireo kandida izay afera mbola tsy nisy didim-pitsarana raikitra momba azy ireny fa dia mijanona ho kandida hatrany izy ireny.
jeudi, 09 mai 2019 14:48
Irmah Naharimamy: Ny masoandro maty no nampalahelo
Naneho ny vinany tamin'ny alalan'ny écran géant ny Kandida ho solombavambahoaka Irmah Naharimamy, natolotry ny antoko politika Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, laharana faha 8, eto Toamasina I.
Liana tokoa ny rehetra nanaraka ny fanazavana ka ny masoandro maty no nampalahelo.
Mbola nanohy nitety ireo fokontany Irmah Naharimamy taorian'izay.
jeudi, 09 mai 2019 14:12
Rastany: Mitohy ny fitetezana ireo fokontany eto amin'ny Boriborintany faha II
Manohy ny fitetezana ireo fokontany eto amin'ny Boriborintany faha II i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, mitondra ny laharana faha 9 amin'ny bileta tokana.
Voatsidika tamin'izany ny fokontany Ambohitsoa, Ambohimiandra, Mahazoarivo ary Mandroseza.
Nifampiresaka mivantana tamin'ireo mponina izy sy ireo mpiara-miasa aminy nanazavany ny vinany, sy nihainoany ny hetahetan'ny mponina.
Voaresaka tamin'izany ny fijalian'ny mponina amin'ny resaka rano, ny fandriam-pahalemana, ny fampianaran-janaka, ny vidim-piainana midangana, ny fahasalamana tsy araka ny vidim-panafody, ny tanora tsy ampy fialam-boly.
Nankasitra an'i Rastany ny mponina amin'ireo asa soa fanaony ety amin'ny Boriborintany faha II.
jeudi, 09 mai 2019 13:49
« Accès Banque » Bazary Kely: 50 tapitrisa Ariary an'ny banky miampy finday sy volan’ny mpanjifa lasan’ny jiolahy
Jiolahy 04, araky ny loharanom-baovaon'ny polisy, tsy misaron-tava mirongo basy poleta 02 no nandromba ny « Accès Banque » tao Bazary Kely Toamasina ny atoandron’ny 08 mey 2019.
Niditra an-keriny tao amin'ity banky ity ireo jiolahy ary nendahan'izy ireo avokoa ireo mpanjifa sendra azy ireo tao ary norobain'izy ireo ny vola rehetra tao amin'ny « caisse ». Mitentina 50 tapitrisa Ariary ny volan'ny banky miampy vola maro no nalain'izy ireo tamin'ireo mpanjifa.
Nitsoaka tamin'ny moto ireto jiolahy ireto taorian’izay. Najanon’izy ireo teny an-dalana ny moto iray rehefa nahita ny fiavin'ny Polisy nanenjika izy ireo.